Intatheli ye-Eyethu - February 20, 2014
U-Rantie osayinisiwe ngo R35m uzethembile
Intatheli ye-Eyethu - January 24, 2014
ISIKHWISHIKHWISHI somdlali weBafana Bafana uTokelo Rantie osengumgadli weBournemouth ufisa ukuzinza kuleliqembu elisha. Lo mgadli usayiniswe ngoR35 million esuka kwiMalmo yaseSweden. “Ukuzethemba yinto engikhule nginayo kanti izeluleko engizinikwe ngumdlali engikhule ngimkhonzile ngadlala naye kwi-Orlando Pirates uBennedict McCarthy, zizongisiza kakhulu, “Ngesikhathi ngisengumfanyana benginesithombe esikhulu sikaMcCarthy odongeni lwekamelo lami, ngimthanda njengoba namanje ngisakholelwa akakabikhona umdlali onjengaye. “Ungibonise ngezinto…
I-Bafana ibambana ne-Mozambique
Jerry Barnes - January 10, 2014
NOMA kuke kwaba nokungaboni ngaso linye kufanele uMzansi uthembe ukuthi iBafana Bafana izodlala njengamaqhawe kwi-African Nations Championships (Chan) ezoqala ngoMgqibelo eKapa lodumo. Lawa ngamazwi omqeqeshi weBafana u-Gordon Igesund emva kokutshelwa ngomongameli we-Safa u-Danny Jordaan ukuthi abeChiefs neSundowns bavumile ukudedela abadlali. Lomqeqeshi uncome wanconcoza amakilabhu abone kubalulekile ukusiza izwe laseMzansi kunokucabangela amakilabhu. “Mhlambe nobuthongo sebuzokwazi ukwehla….
Akwethusi ukuhamba kuka Larsen
UKUTSHELWA kuka-Clinton Larsen ukuthi ibhantshi lakhe ligcwale umoya ngabaphathi be-Maritzburg United akuthusanga futhi bekulindelekile ukuthi kwenzeke noma yinini. Okuxakayo nje ukuthi emasontweni ababili adlule yizikhulu zayo i-Team Of Choice ezakhuluma zaze zabomvu ebusweni zithi u-Larsen akayi ndawo futhi bazomxhasa ngakho konke akudingayo. Isitatemende esikhishwe usihlalo we-United kulelisonto u-Farouk Kadodia uthe babone kungcono bamkhulule lomqeqeshi ngoba…
Ngizizwa ngimsabela umqeqeshi uKomphela
NGIHLALE ngisho njalo ngithi ezinye izikhulu zebhola noma zamakilabhu ziphethe engathi ziziphathele ama-Spaza Shop azo emalokishini. Benza abakuthandayo nanoma ngasiphi isikhathi ngamakilabhu abo. Abanye babo bake bakhulume sengathi behla emthini noma bengacabanganga kahle-hle. Emavikini ambalwa adlule ababhali bezebhola bake babuza ngekusasa lomqeqeshi we-Maritzburg United u-Clinton Larsen kodwa abaphathi balekilabhu bashaya phansi. Bathi nokho noma bekhathazekile…
Mhlambe kungcono ukuzithulela
NGIHLALE ngisho njalo ngithi ezinye izikhulu zebhola noma zamakilabhu ziphethe engathi ziziphathele ama-Spaza Shop azo emalokishini. Benza abakuthandayo nanoma ngasiphi isikhathi ngamakilabhu abo. Abanye babo bake bakhulume sengathi behla emthini noma bengacabanganga kahle-hle. Emavikini ambalwa adlule ababhali bezebhola bake babuza ngekusasa loMqeqeshi we-Maritzburg United u-Clinton Larsen kodwa abaphathi balekilabhu bashaya phansi bathi nokho noma bekhathazekile…
UKomphela usayine kuMaritzburg United
Sicebi Mbanjwa no Nokuthula Khanyile - January 6, 2014
Sekuqinisekisiwe ukuthi uSteve Komphela usayine inkontileka yeminyaka emibili nengxenye njengomqeqeshi weqembu iMaritzburg United.Lomqeqeshi wethulwe ngokusemthethweni abaphathi baleliqembu esithangamini sabezindaba ebesibanjelwe ehhotela i-Stay Easy eMgungundlovu ngoMsombuluko. Leliqembu elaziwa nge-Team of Choice lisale lingenaye umqeqeshi kulandela ukuxoshwa kukaClinton Larsen emavikini amabili adlule,nokwenze ukuthi leliqembu lilande uKomphela ukuze alisize livike izembe lokuya ehlathini.UKomphela uthatha lesikhundla nje naye kade…